UNDP oo Tababar dhinaca horumarinta amniga ah u furtay madaxda wasaarada amniga (Dhegeyso) – Radio Daljir
Luulyo 22, 2013 7:28 b 0
Garoowe, July 22- 2013 – Madaxweyne ku xigeenka Puntland Gen. Cabdisamad Cali shire ayaa maanta furay tababar loo qabtay agaasimayaasha wasaarada amniga iyo DDR ee Puntland, tababarkaas oo kor loogu qaadayo aqoontooda maamulka iyo tan shaqo.
Tababarka oo ay soo qaban-qaabisay Hay?ada UNDP ayaa waxaa uu ka socon doona muddo saddex maalmood ah xaruunta PDRC ee Garoowe, waxaana kulanka furitaanka oo ah mid laga jeediyey khudbado badan goobta joogay, Madaxweyne ku xigeenka Puntland, madax ka socotay UN-ka iyo kuwa kale oo ka socday hay?ada cilmi baarista Puntland ee PDRC.
Wasiirka amniga Puntland Khaliif Ciise ayaa yiri ” Tababarka waxaan ugu talo-galay inaan kobcino garaadka maamulka wasaarada , in aan isbarno iyaga si ay uwada shaqayn lahaayeen, iyo in aan nidaam u samayno sidii isku mid loogu fulin lahaa maamulka wasaarada dhexdeeda, maamulkaas si loo gaarsiiyo gobollada iyo degmooyinka kale ee Puntland.?.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Gen. Cabdisamad Cali shire oo hadal furitaanka jeediyey, wuxuu sheegay in shaqada ugu badan ee maamulku uu haatan hayo ay korka ka saaran tahay wasaarada amniga, wuxuuna ugu baaqay dhabar adayg iyo howl-karnimo.
? maanta waxaynu wada ogsoonahay in Puntland nacab badan leedahay, mid shisheeya iyo mid sokeeye intaba, debeda ama gudaha ha ahaadee, waxaa loo baahan yahay in aan dhamaanteen isha ku wada hayno, idinkuna aad hormuud u noqotaan? ayuu yiri Gen. Shire
Madaxda Puntland ee tababarka furay maanta iyo masuuliyiintii ka qeyb galay intaba waxay mahad u jeediyeen agaasimihii hay?ada UNDP ee Puntland Mr Neck, kaasi oo shaqada uu ka hayey deeganada Puntland laga bedelay, Gen. Cabdisamad ayaa sheegay in Puntland ay ka xuntahay bedelida lagu sameeyey Mr. Neck, balse bedelkiisa wuxuu rajeeyey masuul wanaagsan oo cusub.
Dhegeyso war-bixinta Tababarka Amniga iyo UNDP Abdirahman ?Yuusuf.